နောက်ခံလူ တစ်ယောက်ကို ရောင်းထုတ်ပြီး အာဂျင်တီးနား နောက်ခံလူကို ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ် – Zeekwat Hot News
May 17, 2019035
အာဆင်နယ် အသင်း ဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ အကြီးအကျယ် ခံနေရတဲ့ နောက်ခံလူ မူစတာဖီ ကို ရောင်းထုတ် ပြီး ဂရီမီယို နဲ့ အာဂျင်တီးနား နောက်ခံလူ ဝေါလ်တာ ကာနီမန်း ( Walter Kannemann ) ကို ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ် ထား နေပါ တယ် ။အာဆင်နယ် အသင်း ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်သာ မရပါက လာမယ့် နွေရာသီမှာ အပြောင်းအရွှေ့ အသုံး စရိတ် ပေါင် သန်း ၅၀ အောက်သာ ရရှိဖွယ် ရှိနေတယ် လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ် နေပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရရင်တော့ ပိုများတဲ့ ပမာဏကို အသုံးပြုဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။အာဆင်နယ် အသင်း ဟာ ယခုနှစ် ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဆင့် ငါးနေရာမှာသာ ရပ်တည် နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်နဲ့ လွဲချော် ခဲ့ပါတယ် ။
ဒါပေ မယ့် အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက် ထားနိုင်တာကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် မျှော်လင့်ချက် ရှိနေပါသေး တယ် ။Fox Sports Argentina ရဲ့ ဖော်ပြချက် အရ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ဂရီမီယို အသင်း နောက်ခံလူ ကာနီမန်း ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ် ဝင်စား နေပြီး ပေါင် ၁၁ သန်း ဝန်းကျင်နဲ့ ကမ်းလှမ်း ဖို့ စီစဉ် နေ တယ် လို့ သတင်းတွေ ထွက် ပေါ် နေ ပါ တယ် ။အသက် ၂၈ နှစ် အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ အာဂျင်တီးနား လက်ရွေးစင် နောက်ခံလူ ကာနီမန်း ရဲ့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေးဟာ ပေါင် ၁၇ သန်း ရှိနေပေမယ့်
အာဆင်နယ် အသင်း ကတော့ ပေါင် ၁၁ ဝန်းကျင်နဲ့သာ ကမ်းလှမ်းဖို့ စီစဉ် နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ကာနီမန်း ဟာ ဆန်လော်ရန်ဇို အသင်း နဲ့ရော ၊ ဂရီမီယို အသင်းနဲ့ပါ ကိုပါ လစ်ဘာတေးဒိုး ဖလားကို ရယူထားနိုင်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် တုန်းက ဂွာတီမာလာ နဲ့ ခြေစမ်းပွဲမှာ နိုင်ငံ လက်ရွေးစင် အသင်းအတွက် ပွဲဦးထွက် ကစားခွင့် ရခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကိုပါအမေရိက ဖလား ကစားမယ့် အာဂျင်တီးနား အသင်းရဲ့ ပဏာမ အယောက် ၄၀ လူစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ။
နောကျခံလူ တဈယောကျကို ရောငျးထုတျပွီး အာဂငျြတီးနား နောကျခံလူကို ချေါယူဖို့ ပဈမှတျထားနခေဲ့တဲ့ အာဆငျနယျ
အာဆငျနယျ အသငျး ဟာ ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ အကွီးအကယျြ ခံနရေတဲ့ နောကျခံလူ မူစတာဖီ ကို ရောငျးထုတျ ပွီး ဂရီမီယို နဲ့ အာဂငျြတီးနား နောကျခံလူ ဝေါလျတာ ကာနီမနျး ( Walter Kannemann ) ကို ချေါယူဖို့ ပဈမှတျ ထား နပေါ တယျ ။အာဆငျနယျ အသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျခှငျ့သာ မရပါက လာမယျ့ နှရောသီမှာ အပွောငျးအရှေ့ အသုံး စရိတျ ပေါငျ သနျး ၅၀ အောကျသာ ရရှိဖှယျ ရှိနတေယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါ နပွေီး ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျခှငျ့ ရရငျတော့ ပိုမြားတဲ့ ပမာဏကို အသုံးပွုဖှယျ ရှိနပေါတယျ ။အာဆငျနယျ အသငျးဟာ ယခုနှဈ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အဆငျ့ ငါးနရောမှာသာ ရပျတညျ နိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျခှငျ့နဲ့ လှဲခြျော ခဲ့ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အာဆငျနယျ အသငျးဟာ ယူရိုပါလိဂျ ဗိုလျလုပှဲ တကျရောကျ ထားနိုငျတာကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ဝငျခှငျ့ မြှျောလငျ့ခကျြ ရှိနပေါသေးတယျ ။Fox Sports Argentina ရဲ့ ဖျောပွခကျြ အရ အာဆငျနယျ အသငျးဟာ ဂရီမီယို အသငျး နောကျခံလူ ကာနီမနျး ကို ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစား နပွေီး ပေါငျ ၁၁ သနျး ဝနျးကငျြနဲ့ ကမျးလှမျး ဖို့ စီစဉျ နေ တယျ လို့ သတငျးတှေ ထှကျ ပျေါ နေ ပါ တယျ ။အသကျ ၂၈ နှဈ အရှယျ ရှိပွီ ဖွဈတဲ့ အာဂငျြတီးနား လကျရှေးစငျ နောကျခံလူ ကာနီမနျး ရဲ့ စာခြုပျ ဖကျြသိမျးကွေးဟာ ပေါငျ ၁၇ သနျး ရှိနပေမေယျ့ အာဆငျနယျ အသငျး ကတော့ ပေါငျ ၁၁ ဝနျးကငျြနဲ့သာ ကမျးလှမျးဖို့ စီစဉျ နတောလညျး ဖွဈပါတယျ ။ ကာနီမနျး ဟာ ဆနျလျောရနျဇို အသငျး နဲ့ရော ၊ ဂရီမီယို အသငျးနဲ့ပါ ကိုပါ လဈဘာတေးဒိုး ဖလားကို ရယူထားနိုငျပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈ တုနျးက ဂှာတီမာလာ နဲ့ ခွစေမျးပှဲမှာ နိုငျငံ လကျရှေးစငျ အသငျးအတှကျ ပှဲဦးထှကျ ကစားခှငျ့ ရခဲ့ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ကိုပါအမရေိက ဖလား ကစားမယျ့ အာဂငျြတီးနား အသငျးရဲ့ ပဏာမ အယောကျ ၄၀ လူစာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ ။
Hey Buddy!, I found this information for you: "နောက်ခံလူ တစ်ယောက်ကို ရောင်းထုတ်ပြီး အာဂျင်တီးနား နောက်ခံလူကို ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/939. Thank you.